U-Tarkan ngumculi odumile, ongumculi waseTurkey. Ndiyabulela italente yakhe, wazuza amaninzi ama-abalandeli. Igama elipheleleyo lomculi ngu-Husametin Tarkan Tevetoglu. E-Turkey, uyaziwa ngokuba yi "Prince of Pop Pop". Isihloko esinjalo esasifumana ngenxa yempembelelo yakhe kwimiboniso kulabaphulaphuli ngexesha lamakhonsathi. UTarkan ungumnikazi wenkampani yomculo "HITT Music", kwaye wakhupha ii-albhamu ezininzi zeplatinum. Kufuneka kuqatshelwe ukuba wayengowokuqala kwaye kuphela kuphela umculi owaziwayo kwiYurophu, ngaphandle kokukhulula ingoma enye ngesiNgesi.
Ezinye ze-biography zikaTarkan
Uzalwe ngumculi eJamani kwisixeko sase-Alzey. Abazali bakhe bangabantu baseTurkey, kodwa emva kobunzima bezoqoqosho kwilizwe bafuneka bafuduke eJamani. Unabantakwabo ababini noodade abathathu. UTarkan wabuyela ezweni lakubo eneminyaka eyi-13. Apho waqhubeka nokufunda, kwakunye nokuphuhlisa umsebenzi wakhe, owaqala ngo-1992.
Ngaloo ndlela wakhulula i-albhamu yakhe yokuqala "Yine Sensiz", kwaye ngelanga elilandelayo wavuka eyaziwayo. Isitayela sokuthengisa sikaTarkan ukususela ekuqaleni kwakuyi-earring endlebeni yakhe, i-T-shirts elula kunye neendwangu zokuhlutha . Ngozuko naye wayeneeninzi zabalandeli abaphupha ngeendawo zokukhangela izithixo zabo ngeliso elinye. Ngokukhawuleza watshintsha umfanekiso wakhe waza wakhula iinwele zakhe, waba nguphawu lwesimbolo kubantu abatsha.
Ubomi bomntu kaTarkan nomtshato wakhe
Kuyaziwa ukuba iminyaka emininzi umculi wayexhunyiwe ngokubambisana noBilge Ozturk. Nangona kunjalo, ngaphambi komtshato, akuzange kube njalo. Nangona kunjalo, ngo-Apreli 2016, uTarkan oneminyaka engama-43 ubudala usenqume ukuthetha ngokunyanisekileyo kwimeko yakhe yokubhaliweyo kwaye ngoku utshatile nomngane wakhe uPynar Dilek. Intombazana incinci kunomthandi wayo iminyaka elishumi. Kukwaziwa kwakhona ukuba umtshato kaTarkan noPynar Dilek wabanjwa kabini.
I-Biography yomculi uTarkan
Ukukhula kunye nezinye iiparitha zeTarkan
Umcimbi wokuqala womtshato abawubambelele kwisiganeko esincinci seentsapho kunye nabantu abasondeleyo. Okwesibini umtshato womculi uTarkan wayeseJamani kwintsimi yezityalo zaseCologne. Kulo mkhosi, bamenywa abangaphezu kwekhulu kwiindwendwe, kuquka izihlobo, abaninzi babo bahlala kweli lizwe. Kubalulekile ukuba uqaphele ukuba umtshakazi wayegqoke ingubo esuka kwi-brand ye-Pronovias. Umyeni wanikela inketho kwi-designer yaseTurkey.
UBill Murray wathenga onke amathikithi ekhonsathi waza wabasasaza kwabo bafuna
U-Angelina Jolie wenza iseshoni ye-autograph kwisigqoko se-mini emva kokuya kwiNgqungquthela yokuQala abaPhicileli
UMiranda Kerr wabonakala kuqala esidlangalaleni emva kweendlebe zokukhulelwa
UChrissy Tagen wanqoba ukuxinezeleka kwangemva kokusasazela uJohn Legend
USir Paul McCartney uya kutshintsha izakhono zakhe zokwenza kwi "Pirates of the Caribbean"
ESpain, wakhupha isidumbu sikaSalvador Dali
UBlake Uhlala kunye nentombi yakhe
USir Paul McCartney akavumelekanga ukuba adlale iGrammy
UJane Fonda wandixelele ukuba kutheni unobumba obunamathele ebusweni bakhe
U-Adrian Brody wajoyina i-series ye "series Sharp"
Umdlalo wokuqala ukusuka ekuqhutshweni kwe "Eight Ocean Girlfriends"
Ukutya isidlo kunye noLeonardo DiCaprio kunye noKate Winslet badityanisiwe
UKim Kardashian uya kufihla kwinqanaba labaphangi
Uhlobo olutsha lomsebenzi: U-Eva Green kunye noTim Burton ngoku kunye?
I-Zucchini kwi-oven ngokukhawuleza kwaye iyanandi - zokupheka izitya zangasese zemihla ngemihla
Indlela yokulahlekelwa isisindo intombazana?
UDaffodils - utyalo ekwindla
Izinto ezi-37 uqala ukuzizisola emva kwe-30
Ukufundisa ukubhukuda kubantwana basesikolweni
Umkhwa waseMelika - yenze imifanekiso enemifanekiso!
Indlela yokuchonga ngesondo somntu oqhekezayo?
Ukudibanisa okunemveliso emqaleni
Kutheni inwele iphuma emva kokuzalwa?
Iiswisi kwiimvavanyo ze-oven
Yintoni enokumnika umntwana kwisifo sohudo?
Yintoni kufuneka umntwana akwazi ukuyenza kwiinyanga ezili-9?
Izandi zomtshato zaseSlavic
Imfihlelo yokunyamalala kwamathambokazi Lady Gaga
Yintoni enokuyenza ngeLwesine elungileyo - iimpawu
Iingxowa ezincinci phezu kwephepha
UMichael Douglas uqinisekise ukuba uVal Kilmer akakwazi ukunqoba umdlavuza
Ukukhutshwa komnyama emva kokuya esikhathini
Indlela yokuzinqabisa phambi kokuhlolwa?